Wadahadaladii heshiis kordhinta David De Gea oo hakad uu ku yimid (Maxaa jira?) – Gool FM
Wadahadaladii heshiis kordhinta David De Gea oo hakad uu ku yimid (Maxaa jira?)
Liibaan Fantastic August 9, 2017
(Manchester) 09 Agoosto 2017 Manchester United ayaa hakisay wadahadaladii heshiis kordhinta goolhayaha reer Spain ee David De Gea.
The Sun ayaa baahisay in arinkaan uu yimid kadib markii United uu ka yaraaday cadaadiskii uga imaanayay dhanka Real Madrid oo doonaysa saxiixa David de Gea.
Manchester United ayaa ogaatay in tababare Zidane uu maankiisa ka saaray saxiixa David De Gea xaggaagan, wuxuuna go’aansaday inuu sii haysto goolhaye Navas.
Kooxda tababare Mourinho ayaa ku dadaalaysay sidii ay heshiis cusub uga saxiixi lahayd De Gea kaas oo isbuucii uu ku qaadan lahaa 200 kun oo Ginni si ay uga hor istaagto in laacibku uu u dhaqaaqo Real Madrid.
“Wali laba sano ayaa uga harsan heshiiskiisa iyada oo lagu darsan karo sanad 3-aad, haatan kooxdu waxay qaadan kartaa waqti kufilan mana loo baahna dag dag, waxaan ognahay kaliya in David uu doonayay u dhaqaaqida Real Madrid” ayuu yiri masuul ka tirsan United oo la hadlay The Sun.
“Waa inaan sugnaa ilaa xaggaaga dambe si aan u aragno inay isku dayayaan markale saxiixiisa”.
XOG: Lucas Biglia oo bil garoomada ka maqnaanaya